Steam Boiler အကြောင်းသိရှိသုများဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ > Steam Boiler အကြောင်းသိရှိသုများဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်
View Full Version : Steam Boiler အကြောင်းသိရှိသုများဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိုင်လာများကို 1တန် 2တန် စသည် ဖြင့်ခေါဆိုကြပါသည်။
ဥပမာ= Steam Boiler 3-တန်တလုံးတွင် ၄င်း တန်ကို တနာရီလျင် အီဗာပိုရေးရှင်း evaporation
ရေနွေးငွေ့3တန်ထွက်လျှင် = 3တန်ဘိုင်လာဟု ခေါဆိုပါသည်။
ထိုသို့ (တန်=ton) ကိုတွက်ချက်ရာတွင် steam=ရေနွေးငွေ့ထွက်နှုန်းကို
steam flow meter နှင့် တိုင်းလို့ရပါသည်။
သို့ရာတွင် steam flow meter မရှိသည့် အခါ ဘိုင်လာအတွင်းသို့
ရေသွင်းပေးသည့် Feed pump နှင့် ဘိုင်လာအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း
ရေ၀င်နူန်း တနာရီလျှင် (220 ဂါလံ) ၀င်လျှင် 1တန် ဟုသက်မှတ်ပါသည်။
၄င်းတွက်ချက်မှူ့မှာ Steam flow meter နှင့်တွက်သကဲ့သို့ တိတိကျကျ
မှန်နိုင်ပါသလား ၊ မမှန်ကန်လျှင်လည်း မည်ကဲ့သို့ ကွာခြားမှု့ရှိနိုင်သည်ကို
multi pressure systems မှာ Q ကို တွက်တဲ့ အခါ ton နဲ.လဲတွက်သလို kilowatt(kilojoule per sec) နဲ.လဲတွက်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ heat ရဲ. ယူနစ်က kilojoule လေ ။ ton ဆိုတာက အပူဝင်တဲ့နှုန်း rate of heat flow ကို ပြောတာပါ ။ 1ton = 211 kjoule per min ရှိတယ် (ဆိုလိုတာက တစ်မိနစ်မှာ အပူ ၂၁၁ ကီလိုဂျိုး ၀င်တယ်ပေါ့) ။
ရေ တစ်ဂါလန် နှစ်ဂါလန် ဆိုတာက mass flow rate ပါ ။ အဲ့ ဒါကို mf လို.သတ်မှတ်တယ် ။ evaporator ကို တစ်နာရီ ရေ 1 gallan ၀င်ရင် ဘယ်လောက် အပူထွက်မလဲကို တွက်ကြည့်ရင်ရနိင်ပါတယ် Q = mf (h2-h1) ;
h = enthalpy from refrigerant chart . mf unit ကို kilogram per min ပြောင်းပေးဖို.မမေ့နဲ.ဦးနော် ။
Q(rate of heat flow)= tons ; kW ; -----&gt; kilojoule per min (kj/min)
mf(rate of mass flow)= gallan of water per hr ----- &gt; kilogram per min (kg/min)
တွက်ချက်ကြည့်နော် ။ ကျနော်ပြောတာ ကျောင်းမှာသင်တာကို ပြန်ပြောတာ ။
မှန်လိုက်လေ ကို cyေ၇ ဟုတ်သပါ့ ဗျား ကိုတိုးလဲ သင်ဖူးတယ်လေ flukd mechanic လေ ။ အဲ ဆိုင်မဆိုင်တော့ သိဘူးနော်
multi pressure systems မှာ Q ကို တွက်တဲ့ အခါ ton နဲ.လဲတွက်သလို kilowatt(kilojoule per hr) နဲ.လဲတွက်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ heat ရဲ. ယူနစ်က kilojoule လေ ။ ton ဆိုတာက အပူဝင်တဲ့နှုန်း rate of heat flow ကို ပြောတာပါ ။ 1ton = 211 kjoule per min ရှိတယ် (ဆိုလိုတာက တစ်မိနစ်မှာ အပူ ၂၁၁ ကီလိုဂျိုး ၀င်တယ်ပေါ့) ။
ရေ တစ်ဂါလန် နှစ်ဂါလန် ဆိုတာက mass flow rate ပါ ။ အဲ့ ဒါကို mf လို.သတ်မှတ်တယ် ။ evaporator ကို တစ်နာရီ ရေ 1 gallan ၀င်ရင် ဘယ်လောက် အပူထွက်မလဲကို တွက်ကြည့်ရင်ရနိင်ပါတယ် ။ ဒါကလဲ့ evaporator က data တွေပေးထားမှ တွက်လို.ရမှာ refrigerant ကရောဘာအမျိုးအစားလဲ (R-12 ၊ Amonia) စသည်ဖြင့်ပေါ့ ။ ဒါတွေကိုကိုသိရင် Q = mf (h2-h1) ;
Steam Boiler ဆိုသည်မှာရေကို လောင်စာနှင့်မီးလောင်ပီး အပှုပေးသောအခါ ရေနွေးငွေ့ထွက်ပေါလာအောင် ပြူလုပ်ပေးနိုင်သော
၄င်း Boiler မှာ Refrigerant မပါဝင်ပါဘုးခင်ဗျာ။ အအေးခန်းများတွင်သုံးသော (R-12,Amonia )စသည့် gas များမပါဝင်ပါခင်ဗျာ။
Refrigerant မှာ (chiller =လေအေးပေးစက်အကြီးစား )များတွင်သာအသုံးပြူသည် ဟုထင်ပါသည်။
mf(rate of mass flow) ကို တွက်ချက်ရာတွင် evaporator က data များပါရှိမှ တွက်ချက်ရာတွင် အသုံးပြူရမည်ဖြစ်သော်လည်း
Boiler တွင်ပါရှိသော data များမှာ မှုလထုတ်လုပ်သော company မှရရှိသော်လည်း။
အမှန်တကယ်အသုံးပြူသည့်အခါ ၄င်း data များမှန်ကန်မှု့ရှိ မရှိ ကို Actual စမ်းသပ်၊ တိုင်းတာချက်အားသိရှိလိုသောကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Boiler သက်မှတ်ချက် (တန်=ton) ကိုတွက်ချက်ရာတွင် steam=ရေနွေးငွေ့ထွက်နှုန်းကို
သို့ရာတွင် steam flow meter မရှိသည့် အခါ Boiler ဘိုင်လာအတွင်းသို့
ရေသွင်းပေးသည့် Feed pump နှင့် Boiler ဘိုင်လာအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းကုန်ဆုံးသွားသည့်
ရေ၀င်နူန်းသည် တနာရီလျှင် (220 ဂါလံ) ၀င်လျှင် 1တန် ဟုသက်မှတ်ပါသည်။
ကျွန်တော်မေးမြန်းချက်တွင် စကားလုံး ဝေါဟာရ နှင့် အဓိပါယ်များလွဲမှားရင်လည်း ဖိုရမ်နှင့်ကိုစိပိုင် တို့မှခွင့်လွတ်ပေးစေလိုပါတယ်။
ဆောရီးဆောရီး ... အနော်က ရေခဲစက်က evaporator ပဲတွေ.ဘူးတာဆိုတော့ ....ရောသွားတယ်ဗျာ ...(ခုလောလောဆယ်လဲ
Aircon ပုစ္ဆာတွေ တွက်နေရင်းနဲ.မလို.ပါ ... အနော်မှားပြောတာပါ :) )
Actual စမ်းသပ်၊ တိုင်းတာချက်ကတော့ မလုပ်ဘူးတော့ မသိဘူးဗျိုး ...Steam Boiler conversion table မှာ ပြန်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ် ။
steam အကြောင်းတော့ သင်ဘူးတယ်ဗျ thermodynamic လေ (အဲ့ဒါက တတိယနစ်တုန်းက သင်ဘူးတာ ခုနည်းနည်းမေ့နေဘီလေ) ။
အသုံးဝင်မယ့် တွက်ချက်တာလေးတွေတော့ရှိတယ်လေ ။
ရှာကြည့်လေ ။ အကိုလိုတာရမှာပါ ။
အိမ်တစ်အိမ်မှာ air con design လုပ်ရင် ဘယ်ကစပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အရေးတကြီး သိချင်နေပါတယ်။ somebody help me. thanksalot!!!!!!!!!!!
i don&#039;t understand what do u mean???
design for central aircon type forahome?
or air duct design(plan) ?
or to eastimate cooling capacity?
There isarule of tumb.
10 x 10 x 10 cu ft is required 1 hp of air conditioner if the wimdows are normal size. I mean not much solar heat gain.
မြန်မာနိုင်ငံ မှာဆိုရင်တော. ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေ ဌာန ကို မေး ကြည့်ပါ။ သဘော ကောင်း ကြပါတယ်။
အမှတ် ၃၅။ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း။ မရမ်းကုန်း မြို.နယ်။ ရန်ကုန်
မြန်မာနိုင်ငံ မှာဆိုရင်တော. ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေ ဌာန ကို မေး ကြည့်ပါ။ သဘော ကောင်း ကြပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျွန်တော်လဲ ကျိုက်ဝိုင်းကဟာကိုသိပါတယ် သူတို့က တာရာပွလေးပြောသလိုဖြစ်နေလို့
ဒိပို့ကိုတင်တာပါ ပြိးတော့လဲ ဒိပြဿနာ ကလဲသူတို့နဲပဲ ငြင်းနေရတဲ့ ဟာမို့လို့ပါ။
Right, if 220 gal of feed water is pumped into the boiler, 1 ton of stem is evolved because the mass flow rate is constant through the process however they change their phase.
220 gal of water=990Liter of water = 1000 kg of water
the mass flow rate is constant although water change into water vapor.
So, 1 ton of steam may generate
But in measuring with the steam flow meter, we need to know the accuracy and type of flow meter. Some measure the direct flow rate(measure velocity first and then calculate flow) as in rotor type flow meter but as in the orifice meter they calculate the velocity and then flow from the pressure difference and temperature. So, there is difference in solution between the type of flow meters.
But If we measure actually with the rotor type flow meter, we ever exceed 1 ton of steam/hr for pumping every 220 gal/hr. This may be for the flow meter measure the velocity at the center of the steam pipe. As you know, the velocity of the gas in the center of the pipe is greater than any other area in the pipe. Theoretically we calculate mean velocity dividing by2to the center velocity.Even with that case, the calculated mean velocity is slightly larger than the actual value. This is why the steam flow meter readalittle over than the actual calculated value. I expect 103% of the actual value. All other gas flow meter readalittle over than the actual value.
အိမ်တစ်အိမ်မှာ air con design လုပ်ရင် ဘယ်ကစပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကကျွန်တော်သိသလောက်တော့ပြောပြပါ့မယ်။
ပြီးရင်အဲ့ဒီ room ထဲမှာဘာတွေထားမလဲ heat reject လုပ်တဲ့အရာတွေရှိလား။
ပြိးရင်တပ်မယ့် room temperature ကိုတိုင်းကကြည်.ပါ။အပူဆုံးအချိန်မှာနော်။နေ.လည်၁နာရီ၂နာရီလောက်ပေါ့။
နေမယ့်လူကိုပါစဉ်းစားနော်။လူကလဲheat reject ပါပဲ။
ပြီးရင်တော့cooling load တွက်ကြည့်ပါ။
Feed water volume = dry-saturated steam volume + carry-over water volume + blowdown water volume
dry-saturated steam = output steam to comsumer
carry-over water = water contain with steam output
blowdown water = blow out for deposited (slaged) water
ကျွန်တော်သဘေ်ာလိုက်တုန်းက Boiler စစ်ဆေးရေးက ရန်ကုန်မှာဖွင့်တဲ့ Boiler Operator သင်တန်းကိုတက်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီမှာ သင်တဲ့ ဆရာတွေကလည်း တော်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာထုတ်ပေးတဲ့ စာအုပ်က တော်တော်ကောင်းတယ်။ အမျိုးအစားအလိုက် တည်ဆောက်ပုံတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ်။၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်ကပါ။ ၂၀၀၅ ခုနစ် မှာ ရန်ကုန်ကနေ ပြောင်းလာတော့ စာအုပ်ကို သယ်လာခဲ့ပေမယ့် အခုပြန်ရှာတဲ့အခမ မတွေ့တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထပ်ရှာကြည့်ပြီး တွေ့ရင်တင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျား။
1. Evaporation rate = mass of steam generated per hour / area of grate
2. Evaporation rate = mass of steam generated per hour / volume of furnace
3. Evaporation rate = mass of steam generated per hour / mass of fuel burnt per hour
Once the generation rate of steam boiler is known area of grate, volume of furnace, mass of fuel burnt per hour can be obtained.
Every boiler may have evaporation rate of water into steam at different feed water temperature, different boiler pressure, different temperature of saturation and different kind of steam.
Standard evaporation unit
The feed water temperature 100C
Working pressure 1.013 = 1 bar at sea level
Quality of steam produced under these condition as dry and saturated having enthalpy of evaporation = 2256.9 kJ/kg
Saturated = the steam emerging from the boiling liquid
Saturation temperature = the temperature boiling occur
Superheat =when temperature is raised above the saturation temperature corresponding to it pressure
Dryness friction = the quantity of liquid mixed with water vapor
Boiler based on
1.	Tube shape &amp; position – tubular heating surfaces
2.	Usage (mobile or stationary)
3.	Heat source – combustion of fuel in solid liquid or gases form, electrical energy and nuclear energy.
4.	Circulation of water and flue gases (natural circulation or forced)
5.	Shell – one or more steel plate made into cylindrical shape and welded or riveted together – the end of shell is boiler head
6.	Drum – the shell and head together form the drum.
7.	Foundation of settings
8.	Grate – cast iron bar on which solid fuel like coal burnt
9.	Furnace – the space aboveagrate and belowashell of boiler and fuel burnt here.
10.	Space for water – the space of boiler shell occupied with water
11.	Space for steam – the entire space of boiler which is not occupied by water and tube
12.	Heating surface –surface of boiler which is exposed to hot gases on one side and water on other side
ကျွန်တော်သဘေ်ာလိုက်တုန်းက Boiler စစ်ဆေးရေးက ရန်ကုန်မှာဖွင့်တဲ့ Boiler Operator သင်တန်းကိုတက်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီမှာ သင်တဲ့ ဆရာတွေကလည်း တော်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာထုတ်ပေးတဲ့ စာအုပ်က တော်တော်ကောင်းတယ်။ အမျိုးအစားအလိုက် တည်ဆောက်ပုံတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ်။၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်ကပါ။ ၂၀၀၅ ခုနစ် မှာ ရန်ကုန်ကနေ ဒီကိုပြောင်းလာတော့ အဲဒီစာအုပ်ကို သယ်လာခဲ့ပေမယ့် အခုပြန်ရှာတော့ မတွေ့တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထပ်ရှာကြည့်ပြီး တွေ့ရင်တင်ပေးပါ့မယ်။
အဲ့ဒီ သင်တန်းစာအုပ် ကျနော်ဆီမှာရှိတယ် ။ လိုချင်ရင်ပြောပါ ။ ebooks တော့မဟုတ်ဘူး ။
Boiler အကြောင်းပြောရင်း နဲ့
စက်မှု ၁ ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ site ကို အမှတ်မထင်တွေ့မိလေရဲ့
up to date လား 2005 တုံးက data လားတော့ မသိဘူး... &quot; Over 2300 boilers are now in use in various industries in Myanmar.&quot; တဲ့
Pressure vessel ကို ဘယ် standard အရ (e.g ASME) စက်မှု ၁ ကလက်ခံပါသလဲ?
Boiler&#039;s operator အတွက် သီးသန့် Certificate လိုပါသလား?
Boiler လို့သတ်မှတ်တဲ့ minium and maximun capacity က ဘယ်လောက် range (e.g. 1 tons and above) အတွင်းလဲ?
Boiler installation, maintenance, service တွေကိုပဲ specialize လုပ်တဲ့ Local company ရှိပါသလား?
ကို Zeroff ရေ
Pressure vessel ကို ဘယ် standard အရ (e.g ASME) စက်မှု ၁ ကလက်ခံပါသလဲ ဆိုတာကိုတော့ မကြားဘူးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် စက်မူ့(၁) နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စက်ရုံ
များမှာတော့ အသုံးပြုမည့် လုပ်ငန်းအပေါမူတည် ပြီး Boiler Pressure vessel ကို သက်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှ လက်ခံပါတယ်။
Boiler&#039;s operator အတွက် Boiler သင်တန်းမှ သင်တန်းအောင်မြင်လက်မှတ် Certificate လိုပါတယ် ခင်ဗျား ။ ဒါမှလဲ ဘိုင်လာကို မောင်းနှင်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုတယ်
( မြန်မာနိုင်ငံမှာ Boiler လို့သတ်မှတ်တဲ့ minium and maximun capacity က ဘယ်လောက် range (e.g. 1 tons and above) အတွင်းလဲ? )ဆိုတဲ့ အဖြေကိုတော့မသိပါဘူး။
မြန်မာနိင်ငံမှာ Boiler installation, maintenance, service တွေကိုပဲ specialize လုပ်တဲ့ Local company တွေရှီပါတယ်။
( U.T.S Engineering group ,8 mile .yangon မှာ၇ှိပါတယ် ဆက်သွယ်ချင်ရင် tnaing18@gmail.com ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ )
ဘိုင်လာ ဥပဒေမှာ ပါဝင်ပါဒယ် ဘိုင်လာဆိုတာ အနည်းဆုံး 1kgf/cm sq သို. 14.2 lbf/in sq ဖိအားခံနိင်တဲ့ အိုးနဲ. စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်
ဘိုင်လာလို. သတ်မှတ်ပါတယ် ။
Pressure vessel ကို ဘိုင်လာစစ်ဆေးရေးမှုးချုပ် လက်မှတ်ပါမှ လက်ခံပါတယ် ။ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကိုလဲ ဘိုင်လာ ဥပဒေ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ။
မှတ်ပုံတင်ပြီး ဘိုင်လာ အသုံးပြုခွင့်ရမှ ဘိုင်လာအော်ပရေတာ ကိုမွန်းမံ သင်တန်းထပ်ပေးတယ်လို.တော့မှတ်သားဘူးပါတယ် ။
ကို cy ခင်ဗျား
Boiler Operator သင်တန်းတက်တုန်းက စာအုပ်ကိုလုံးဝပြန်ရှာလို့ မတွေ့တော့ပါဘူး။ebook မဟုတ်တော့ Forum မှာတင်ပေးရင် သိပ်မလွယ်ကူနိုင်လောက်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ ကို cy ဆီမှာရှိရင် Forum မှာ ဝေမျှ ပေးပါခင်ဗျား။
Boiler Operator သင်တန်းတက်တုန်းက စာအုပ်ကိုလုံးဝပြန်ရှာလို့ မတွေ့တော့ပါဘူး။ ကို cy ဆီမှာရှိရင် Forum မှာ ဝေမျှ ပေးပါခင်ဗျား။ebook မဟုတ်တော့ Forum မှာတင်ပေးရင် သိပ်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ဆိုရင်တော့ copy လုပ်ပြီး ပို.လိုက်မယ်လေ ။ ပို.ရမယ့် လိပ်စာကိုတော့ ကျွန်တော်ဆီ pm ပို.ထားလိုက်ပေါ့ ။
ကို cy နဲ့ ကို time0 ခုလို information ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်..
ကို cy ခင်ဗျား လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ပါတဲ့ ဘိုင်လာ ဥပဒေ information ကိုဘယ်ကရနိုင်ပါသလဲ? ကို cy မှာရှိရင် (အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်) share ပေးလို့ ရမလားခင်ဗျား.....
ကျွန်တော် ခုလေးတင်ပဲ ကျိုက်ဝှမ်း မှာ၇ှိ တဲ့ Boiler စစ်ဆေးရေးဌာန ကို phone (၉၅-၀၁-၆၆၅၄၈၂) ဆက်ပြီးမေးကြည့်ပါတယ်... ဖြေတဲ့လူက oversea call မလို့လား မသိဘူး တခုခုကို စိုးရိမ်နေသံ နဲ့
zeroff - &quot;ဟလို.. ဟလို.. Boiler စစ်ဆေးရေးဌာန ကပါလား ခင်ဗျား&quot;
ဌာန - &quot;ဟုတ်ကဲ့.. ဂျာကြီးလား မသိဘူး&quot;
zeroff - &quot;မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျ... Boiler နဲ့ ပတ်တဲ့ information လေးသိချင်လို့ပါ ခင်ဗျား&quot;
ဌာန - &quot;ဘ ယ်လို information လဲ ခင်ဗျ&quot;
zeroff - &quot;Boiler pressure vessel နဲ့ ပတ်တဲ့ information ပါ&quot;
ဌာန - &quot;အ ခုဆက်နေတာ ဘယ် ဌာနပါလဲ ခင်ဗျ&quot;
zeroff - &quot;ဌာန က မဟုတ်ပါဘူး company တခုကပါ&quot;
ဌာန - &quot;အဲဒါဆို ဌာနကို လာခဲ့ပါ&quot;
zeroff - &quot;ကျွန်တော်က s&#039;pore ကဆက်နေတာပါ.. ဌာနကို လာဖို့မလွယ်လို့ပါ&quot;
ဌာန - &quot;နမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ&quot;
zeroff - &quot;---------ပါ&quot;
ဌာန - &quot;ဘယ် company ကလဲ&quot;
zeroff - &quot;--------- က ပါ&quot;
ဌာန - &quot;အဲဒါဆို ဝန်ကြီးကို တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ&quot; (ဝန်ကြီးဌာနကို တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ ဟုအကြားမှားပြီး)
zeroff - &quot;ဟုတ်ကဲ့ ဖုန်း နံပါတ်က ဘယ်လောက်လဲခင်ဗျား&quot;
ဌာန - &quot;ဟ ဝန်ကြီး ဖုန်းနံပါတ် ကို ကျုပ်တို့ကပေးလို့မရဘူးဗျ&quot; (တင်းသွားသည့်လေသံဖြင့်)
zeroff - &quot;ဟာ.. sorry sorry ဝန်ကြီးဌာနကို တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ်လိုက်လို့ အကြားမှားသွားလို့ပါ.. ကျွန်တော် standard လေးသိချင်ယုံပါပဲ.. &quot;
ဌာန - &quot;ဘာအတွက် မေးတာလဲ&quot;
zeroff - &quot;boiler customer အတွက်ပါ&quot;
ဌာန - &quot;water tubeလား.. fire tube လား&quot; (သေသေချာချာ မကြားလိုက်ရ၍)
zeroff - &quot;ခင်ဗျာ&quot;
ဌာန - &quot;water tubeလား.. fire tube လား... နားလည်လား ကျွန်တော်မေးတာကို&quot;
zeroff - &quot;ဟုတ် water tube ပါ ASME or JIS or...&quot;
ဌာန - &quot;ရတယ် JIS, ASME, ISO အကုန်ရတယ်&quot;
zeroff - &quot;Drain water standard ရော ခင်ဗျား&quot;
ဌာန - &quot;Boiler water လား standard ဝင်ရင် ရပါတယ်&quot;
zeroff - &quot;မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ drain water quality limit ပါ ဥပမာ pH9 ထက်မကျော်ရ ဘာညာပေါ့ Environmental နဲ့ ပတ်သက်&quot; (စကား မဆုံးခင်မှာပဲ)
ဌာန - &quot;Phone ထဲကပြောလို့မကောင်းပါဘူး.. လူကိုယ်တိုင်လာခဲ့ပါ ရှင်းပြပါ့မယ်&quot;
zeroff - &quot;ဟုတ် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်.. boiler ဥပဒေ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ website လေးများရှိရင်ညွန်းပါ.. ဒါမှမဟုတ် တရားဝင်ဖြန့်ဝေတဲ့ စာအုပ်များ ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ&quot;
ဌာန - &quot;link မတင်ထားပါဘူး.. စာအုပ်တော့မဟုတ်ဘူး လုပ်ထုံး လုပ်နည်း ဆိုတာတော့ရှိတယ် ပေးလို့ မရပါဘူး&quot;
zeroff - &quot;ဟုတ် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်&quot;
ဌာန - &quot;ဟုတ်ကဲ့&quot;
ကို cy ရေ အကို့အတွက် illegal distribution လုပ်ရာကြနေမယ်ဆိုရင်တော့ နေပါစေတော့... မဟုတ်ရင်တော့ လိုချင်နေတုံးပါ..
ကို zeroff ခင်ဗျား
ကျွန်တော် ကို cy ကို Requested လုပ်တဲ့စာအုပ်ကလေးထဲမှာများ၊ ပါမလားမသိဘူး။ သိပ်မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် Boiler Operator သင်တန်းတက်ခဲ့တုန်းက၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်ကလို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်လေး က၊ A4Size နဲ့ ချုပ်ထားပြီး၊၊ebook မဟုတ်တော့၊ ကို cy အနေနဲ့ Forum မှာတင်ပေးဖို့၊ အခက်အခဲ တစုံတရာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ကို zeroff လိုချင်တဲ့၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ပါတဲ့ ဘိုင်လာ ဥပဒေ information ကိုလည်း၊ Forum က ည၊ီအကို၊ မောင်နှမ တယောက်ယောက်ထံမှာရှိနေခဲ့ရင်၊ တင်ပေးမယ်လို့၊ ယူဆမိပါတယ်။
နောက်တခုက ကို zeroff ဆက်သွယ်မေးမြန်းစဉ်က၊ ဖြေကြားခဲ့သူရဲ့ အလုပ်ပေါါ မှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ Vision ပါ။ ကိုယ်ဟာ Registration Society တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် Classification Society တစ်ခုမှာလုပ်ကိုင်နေသူလို့၊ အခြေအနေ၊ အကြောင်းတခုခုကြောင့်၊ ကိုယ့်ဘာသာမခံယူထား သူတယောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။
ဟုတ် ဘိုင်လာဥပဒေ အစကနေ ပြန်စကြတာပေါ့ ။ စာပြန်တာနောက်ကျတဲ့အတွက် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ် ။ သည်းခံစောင့်စားဖတ်ရှုအားပေးကြပါလိ်ု. :)
ပုဒ်မ ၂ (က) ဘိုင်လာဆိုသည်မှာ ရေနွေးငွေ.စွမ်းအင်ကို ပြင်ပတွင် အသုံးပြုရန် အပူရှိန်ဖြင့် ရေနွေးငွေ. ထုတ်ပေးသည့် အလုံပိတ် ဖိအားခံအိုးကိုဆိုလိုသည် ။ ယင်းဖိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများလည်းပါဝင်သည် ။ သို.ရာတွင် ၁၅ လီတာ သို.မဟုတ် ၅.၅ ဂါလန် အောက်လျော့နည်းသော ၀င်ဆံဖိအားခံအိုများသည်လည်းကောင်း ၊ တစ်စတုရန်း စင်တီမီတာပေါ်တွင် တစ်ကေဂျီအက်(ဖ်) သို.မဟုတ် တစ်စတုရန်း လက်မပေါ်တွင် ၁၄.၂ ပေါင် ဖိအားအောက် လျော့နည်းသော ဖိအားခံ အိုးများသည်လည်းကောင်း ယင်းဖိအားခံ အိုးတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းများသည် လည်းကောင်း အကျုံးမ၀င် ။
၂။(ခ) ရေးနွေးငွေ. ပိုက်ဆိုသည်မှာ ရေနွေးငွေ. စွမ်းအင်ကို အသုံပြုမည့် နေရာသို. ရေနွေးငွေ. ပို.ရန် ဘိုင်လာမှ သွယ်တန်းထားသော ပင်မပိုက်ကို ဆိုလိုသည် ။ယင်းပိုက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကိရိယာများလည်းပါဝင်သည် ။ သို.ရာတွင် တစ်စတုရန်း စင်တီမီတာပေါ်တွင် ၃.၅ကေဂျီအက်(ဖ်) သို.မဟုတ် တစ်စတုရန်း လက်မပေါ်တွင် ၅၀ ပေါင် အောက် လျော့နည်းသောပိုက်များသည်လည်းကောင်း အကျုံးမ၀င် ။
ဘိုင်လာ ကိုင်တွယ် သူများသင်တန်း စာအုပ်မှ ကူးယူထားသည် ။
ကျွန်တော်ကတော့ 2.5 tons ရှိတဲ့ အော်တိုမေးရှင်း မီးကျွတ် ဘိုင်လာ တစ်လုံးကိုပဲတွေ.ဘူးတာ ဒီဇယ် လောင်စာသုံး ဘန်နာ နဲ.လေ ။
နောက်မှ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ပြပါမယ် ။ လာမယ်ကြာမယ်နော် ။ :P
အခုလို၊ ဘိုင်လာဥပဒေ ကို၊ အချိန်ပေးဖြန့်ဝေဆွေးနွေးတဲ့အတွက်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘိုင်လာ ကိုင်တွယ် သူများသင်တန်း စာအုပ်မှ ကူးယူထားသည် လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်လည်း၊ တချိန်က သင်တန်းမှာ ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့၊ စာအုပ်ကလေးကို၊ သတိရမိပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျား။
ကျွန်တော်သိသောဘိုင်လာ pdf ဖိုင်လေးပါ ။
ဘိုင်လာလုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေတော့ သိပ်မသိပါဘူး ဒါပေမယ့် စာအုပ်ထဲကအတိုင်း ဆိုရင်တော့ ညွှန်ကြားရေးမှုး(ဘိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန) ရဲ.လက်မှတ်ကိုယူရတာပါ ။
ဘိုင်လာသည် ရေကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး (feed water) ရေအမြောက်အမြားကိုအစဉ်အမြဲ အသုံးပြုနေရတယ်လေ ။ ဘယ်လိုရေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အညစ်အကြေး နည်းနည်းတော့ပါမှာပဲလေ ။
ဒါပေမယ့် ဘိုင်လာက ထုတ်လိုက်တဲ့ ရေနွေးငွေ.(steam)ကတော့ အညစ်ကြေးမပါတဲ့ ရေသန်.ဖြစ်တာကြောင့် ဘိုင်လာထဲမှာ (feed water) ထဲက အညစ်အကြေးတွေ ကျန်ထခဲ့မှာပဲလေ ။ ဘိုင်လာသုံးရေများကိုလဲ သင့်တော်တဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ရပါတယ် ။
ရေဂျိုးနှင့် ရွံ.နွံအနည်များ (scales and sediments)
မိုးရေ - သဘာဝရေများထဲတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ။ သို.သော် မိုးရွာသည့် လေထုကိုလိုက်ပြီး အက်စစ်ပါသော ဓါတ်ငွေ.များပျော်ဝင်နိင်သည် ။ မိုးရေသည် မြေကြီးနှင့်ထိတွေ. သည့်အခါတွင်လဲ မြေကြီးမှ ဓါတ်ဆားများ ပျော်ဝင်နိင်သည် ။
ကန်ရေ - မိုးရေမှသော်လည်းကောင်း ၊ မြေကန်တူးခြင်းသော်လည်းကောင်း ။ သဘာဝ ရေကန်မှ သော်လည်းကောင်း ရေကို သုံးခြင်းဖြစ်သည် ၊ တောနယ်တွေမှာတော့ ကန်ရေကို အိမ်သုံးအဖြစ် သုံးကြပါတယ် ။ ကန်ရေများသည် ရေသေဖြစ်သောကြောင့် အနည်နှစ်များ အနယ်ထိုင်ပြီး ရေကြည်လင်ပါသည် ။ ဓါတ်ဆားပျော်ဝင်မှုနည်းသောကြောင့် shell ဘိုင်လာများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို.ဆိုပါတယ် ။
တွင်းရေ - နေရာဒေသအလိုက် ပြောင်းလဲနိင်သည် ။ မြေကြီးမှစိမ့်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဓါတ်ဆားများနှင့် သံဓါတ်များပါဝင်ပြီး များသောအားဖြင့် ရေစေးအမျိုးအစားဖြစ်သည် ။
အ၀ီစိတွင်းရေ - နေရာဒေသအလိုက် ပြောင်းလဲနိင်သည် ။ မြေကြီးအတွင်း နက်ရှိုင်းစွာစိမ့်ဝင်သော ရေဖြစ်သောကြောင့် မြေအနေအထားထူပါက တွင်းရေထက်ပိုဆိုးနိင်သည် ။
မြို.သုံးရေ - ရေလှောင်ကန်ကြီးများမှ ဖြန်.ဖြူးသောသန်.စင်ပြီးရေဖြစ်သည် ။
စိမ့်စမ်းရေ -ကြည်လင်သောရေများဖြစ်သည် ။ အချို.ဒေသများတွင်ထုံးဓါတ်များစွာပါဝင်တက်သည် ။
ချောင်းရေ - မြေသားများပေါ်မှ စီးဆင်းလာသောကြောင့် ရွံ.နွံများ သဲများပါတက်သည် ။ မိုးရာသီတွင် ချောင်ရေများညစ်ညမ်းတက်သည် ။
မြစ်ရေ - ချောင်းများစုပေါင်းခြင်းမှဖြစ်လာသောောကာင့် ရွံနွံသဲများပါဝင်နိင်သည် ပင်လယ်နှင့်နီးသောဒေသများတွင် ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ပင်လယ်ရေများပါဝင်နိင်သည် ။
ပင်လယ်ရေ - ရေငန်ဖြစ်သောကြောင့် ဓါတ်ဆားအများဆုံးပါဝင်သည် ။ ဘိုင်လာအတွက် အဆိုးဆုံးရေဖြစ်ပါတယ် ။
ပေါင်းခံရေ - အသုံးပြုပြီး ရေနွေးငွေ.များကို (condenser)မှာငွေ.ရည်ဖွဲ.ပြီး ဘိုင်လာသုံးေ၇အဖြစ် ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည် ။ Oil , Grease များပါဝင်နိင်သည် ။
ဒီလို သုံးရေတွေအားလုံးကို raw water အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် ။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ Impurities တွေပါဝင်လို.ပါပဲ ။ ဘယ်လို Impurities တွေဆိုတာကို နောက်ပိုစ့်မှာ ဆက်ပြီးဖတ်နိင်ပါတယ် ။
သဘာဝ ရေများတွင်ပါဝင်သော အညစ်အကြေးများ (Impurities)
အစိုင်အခဲများ (solid) - ရေတွင်ပျော်ဝင်လျက်သော်လည်းကောင်း ၊ အနည်အနှစ်များဖြစ်သော်လည်းကောင်းပါဝင်နိင်သည် ။ များသောအားဖြင့် ကယ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်(Calcium carbonate) ဆိုတဲ့ ထုံးကျောက်တွေပေါ့ ။ ထုံးကျောက်က ရေအေးမှာ ပျော်ဝင်လွယ်ပြီးတော့ သဘာဝအတိုင်းအမြောက်အများတွေ.ရနိင်တယ် ။ ကယ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ် ဓါတ်ဆားများ (Alkaline) များရေတွင်ပျော်ဝင်နေဘီဆိုရင် အပူပဲပေးလိုက်ပါ ကာဗွန်နိတ်များ အဖြစ်အနည်ကျလာမယ် ။ ဘိုင်လာမှာ ရေအနည်အနှစ် နည်းနည်း ပဲဖြစ်စေနိင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် တခြား ဓါတ်ငွေ.များနဲ.ပေါင်းမိယင်ဖြင့် မာကြောသောရေချိုးများဖြစ်နိင်ပါတယ် ။
ကယ်ဆီယမ်ဆာလဖိတ် (calcium sulphurhate) – ရေစေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ ဘိုင်လာသံသားတွေမှာ မာကြောတဲ့ ရေချိုးများအဖြစ် ကပ်ညှိနေတက်ပါတယ် ။
မက်ကနီစီယမ်ကလိုရိုက် - မြင့်မားသောအပူချိန်ကြောင့် ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ် အက်ဆစ်ဖြစ်ပေါ်ပါက လွန်စွာ သံချေးစားပါသည် ။ နောက်ထပ် မက်ကနီစီယမ် ဒြပ်ပေါင်းတွေ ၊ကာဗွန်နိတ် ဒြပ်ပေါင်းတွေလဲရှိသေးတယ် ။
အိမ်သုံးဆား(sodium calorite) - ရေတွင်များစွာပျော်ဝင်နိင်သည် ၊Base exchange water softhener များတွင် resin များကို ပြန်လည်ဆေးကြောခြင်း (regeneration) လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည် ။
အစိုင်အခဲတွေ အပြင် (oil and grease) စတဲ့ lubricant တွေ ကာဗွန်တိုင် အောက်ဆိုဒ် ၊ အောက်ဆီဂျင် စတဲ့ ဓါတ်ငွေ.တွေဆိုရင်လဲ ရေမှာပျော်ဝင်နိင်ပါသေးတယ် ။ အထူးသဖြင့် ရေနွေးငွေ.ကို ပြန်လည် အအေးခံအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပေါ့ ။
ဆက်ရန်… ရေစေးရေသွက်(soft water and hard water) နှင့်PH value ၊ ရေသန်.စင်ခြင်း (water treatment process).
ကို cy ခုလို ဆွေးနွေး မျှဝေတာ အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါ၏..
တလက်ဆတည်း m alkalinity &amp; p alkalinity အကြောင်းလေးပါ ပို့ချပေးပါ.. (ဩော် ရလေရလေ အိုတစေ..)
Different between m alkalinity &amp; p alkalinity တို့
how to relate water hardness and p/n alkalinity တို့
how to purify တို့ အပြင်
boiler water ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ (မ လိုအပ်တဲ့) p/n alkalinity limit တို့ပေါ့...
အကို Zeroff ပြောတာတွေက ကျွန်တော်သိပ်မသိဘူးဗျ ။ ကယ်မီကယ် တွေမှသိမယ်ထင်တယ် ။ ဘိုင်လာကို အနားပေးထားတဲ့ အချိန်Wet lay up လုပ်တုန်းက chemical dosing (oxygen neutralization) လုပ်ရတယ်လေ ။ ကျွန်တော်မသိတော့ wiki ကိုပဲမေးကြည့်တော့ ဒီလိုဖြေထားပါတယ် :)
Different between m alkalinity &amp; p alkalinity
There exist three species of alkalinity; bicarbonate, carbonate and hydroxide. The concentration of each species will vary with pH. Total
alkalinity is the measurement of all species of alkalinity in the water. The concentration of each of the three species can be determined by
titratingawater sample with acid ofaknown concentration and using chemical indicators, phenolphthalein (P indicator),methyl orange
(M indicator), orapH meter to determine &quot;endpoints&quot;. The chemical indicators change color atacertain pH points(the endpoint).
The mix of alkaline species change as pH decreases. Hydroxide alkalinity disappears below pH 10.3, carbonate below 8.3 and bicarbonate
below 4.3 (or thereabout). The P indicator turns from pink to clear at or below pH 8.3 The M indicator turns from orange to yellow below
pH 4.3. The amount of acid required to produceacolor change is used to calculate the amount of P and M alkalinity.
The P and M results are use to calculate &quot;O&quot; or hydroxide alkalinity. Depending on the ionic constituents of the water, these relationships
can change or be interfered with.
မေးခွန်းလေးကလှတယ်၊ EC နဲ့ ကျောင်းပြီးပေလို့ပဲ။ ??? ??? ???
Boiler Water Treatment အတွက်ဆွေးနွေးစေချင်တာမဟုတ်လား၊ ဒါတွေက Mechanical Engineer တယောက်အတွက်၊ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သဘေ်ာတွေမှာတော့ Treatment ထုတ်တဲ့ Product Company တွေက၊ Engineer တွေကလာပြီးရှင်းပြတဲ့အပြင်၊ Home Port တွေဝင်တိုင်း၊ Sample water ယူပြီး၊ ကိုယ်တိုင် Test လုပ်ပါတယ်။ သဘေ်ာက4th Engineer တွေက Weekly Test လုပ်ပေမယ့်၊ Product Maker တွေက၊ After Sale Service အနေနဲ့ Provide လုပ်တာပါ။ ကျွန်တော်တော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ဘိုင်လာ ကိုင်တွယ် သူများသင်တန်း စာအုပ်မှ၊ အချက်အလက်ကလေးတွေကို၊ စောင့်ကြရအောင်။ တလက်စတည်း Boiler Water Treatment ကိစ္စတွေအတွက် Forum မှ၊ ညီ၊ အကို၊ မောင်နှမ များက ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျား။
ရေစေး (hard water) ရေသွက် (soft water) နှင့် pH value
ရေသွက် - ဆပ်ပြာနှင့် အလွယ်တကူ အမြုပ်ထွက်တော့ ရေ ။
ရေစေး - ဓါတ်ဆားများပျော်ဝင်နေသောရေ ။ ကယ်ဆီယမ် ၊ မဂ်နီစီယမ် ၊ ကာဗွန်နိတ် ဆာလဖိုက် ဓါတ်ဆားများပျော်ဝင်နေသောရေ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာယီရေစေး - ရေကို ဆူပွက်အောင် ကျိုချက်ရုံဖြင့် ရေသွက် ဖြစ်စေသောရေဖြစ်သည် ။ ကာဗွန်နိတ်(alkaline)ဓါတ်ဆားများသာ ပါဝင်သော ရေဖြစ်သည် ။ အပူပေးပါက ကာဗွန်နိတ်များအဖြစ် အနယ်ကျလာမည်ဖြစ်သည် ။ ဒီလို equation ပါ
ထာဝရရေစေး - ထာဝရရေစေးဆိုသည်မှာ non carbonate , non alkaline များပျော်ဝင်နေသောေ၇ဖြစ်သည် ။ အပူချိန် မြင့်လေ အနည် အနှစ်များ ကျမည်ဖြစ်သည် ။
Carbonate hardness compounds - Calcium carbonate (CaCO3),Magnesium carbonate (MgCO3),
Calcium bicarbonate (Ca(HCO3)2),Magnesium bicarbonate (Mg(HCO3)2),
Calcium hydroxide (Ca(OH)2),Magnesium hydroxide (Mg(OH)2).
Noncarbonate hardness compounds - Calcium sulfate (CaSO4),Magnesium sulfate (MgSO4),Calcium chloride (CaCl2)
pH value = Potential of Hydrogen ion
အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီတွင် ရေ၏ pH value သည် သုံည နှင့် ၁၄ ကြားတွင်ရှိသည် ။
pH value =7ရှိတဲ့ ရေသည် ဘက်မလိုက်ရေ (natural water)
pH value &lt;7ရှိတဲ့ရေသည် အက်စစ်ဓါတ်များသောရေ ။ တန်းဖိုး နည်းလေလေ အက်ဆစ်ဓါတ်များလေလေဖြစ်သည် ။
pH value &gt;7ရှိတဲ့ရေသည် အယ်ကလိုင်း(alkaline) များသောရေဖြစ်ပြီး ။ တန်ဖိုးများလေလေအယ်ကာလိုင်း ဓါတ်များလေလေဖြစ်ပါတယ် ။
ဘိုင်လာ အတွင်းရှိ သင့်တော်သော pH value က ၈.၅ ကနေ ၁၁ လို.ဆိုပါတယ် ။
ကျွန်တော်သိထားတဲ့ Water Treatment process ကတော့ softener နဲ. Ion exchange method ပါ ။
ရေမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ ဓါတ်ဆားကို ဓါတ်ခွဲ.ကြည့်ရင် ဓါတ်ဖို (Cat-ion) နဲ. ဓါတ်မ (An-ion) ဆိုပြီးတော့ရတယ်လေ ။
Base ion exchange softening နည်းကတော့ ရေစေးဖြစ်စေတဲ့ ကယ်ဆီယမ် မဂ်နီစီယမ် ဓါတ်ဆားများရဲ. (positive ion) များရဲ. Hardness ကို လျော့နည်းအောင်လုပ်ပေးတာပါ ။ ပထမဆုံး ရေစေးကို filter စစ်ပြီးတော့ အိမ်သုံးစားတွေ ထည့်ထားတဲ့ (Sodium zerolite resin) ကိုဖြတ်ပြီး ရေတွင်ပါဝင်တဲ့base ion တွေကို ဆိုဒီယမ် အိုင်းယွန်းများနဲ. လဲလှယ်လိုက်တော့ Hardness လျော့နည်းသွားတာပေါ့ ။ဆိုဒီယမ်ဓါတ်ဆားများက အိမ်သုံးဆားဖြစ်ပြီး ရေစေးမဖြစ်စေနိင်ပါဘူး ။ ရေစေးဖြစ်စေတဲ့ ကယ်ဆီယမ် မဂ်နီဆီယမ် ဓါတ်ဆားတွေကတော့ zerolite resin ထဲမှာကျန်ခဲ့မှာဖြစ်လို. Hardness ကိုလျော့သွားမှာလေ ။ အိမ်သုံး ဆား(NaCl) ကို regeneration (အသစ်လဲလှယ်ခြင်း) ကို hardness လျော့ချမှု ကျဆင်းလာရင်လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ် ။
ဒါကတော့ ဘိုင်လာ feed tank ရဲ. Diagram လေးပါ Pressure deaerator လို.ခေါ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီဘိုင်လာ
feed tank က boiler feed pump ရဲ. အမြင့်တနေရာမှာထားရတယ် ။ ဘိုင်လာ feed tank ကအပူချိန် ၈၀
ကနေ ၉၀ လောက်ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ oxygen ကိုအပူပေးပြီးတော့ စတင်ဖယ်ထုတ်ရပါတယ် ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ oxygen ဟာ corrosion ဖြစ်စေနိင်လို့ပါပဲ ။
Saturation temperature ဖြစ်နေတဲ့ ရေဟာ တခြား gas တွေ မ၀င်နိင်တော့ဘူးလို. ဆိုပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရေကို steam ဖြစ်အားပိုကောင်းအောင်လို. Dome ထဲမှာ water drop ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်
အဲ့လိုလုပ်ချင်းအားဖြင့် ရေ၇ဲ.အပူချိန်ဟာ မြန်မြန် တက်လာပြီးတော့ အောက်ဆီဂျင်ကို ဖယ်ထုတ်စေပါတယ် ။
Water vessel ရဲ. ရေ Level ကိုတော့ solenoid valve နဲ.ထိန်းချုပ်ထားပါတယ် ။
အပူပေးမယ့် steam ကိုလဲ pressure control လုပ်ရပြန်တယ် ။ အဲ့ဒါမှ deaerator မှာ အပူချိန်ကို
တည်ငြိမ်မှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ steam / air mixture ဒီဇိုင်းကိုတော့
Dalton&#039;s Law of partial pressures and Henry&#039;s Law တွေကနေ တွက်ချက်ပေးရမှာပါ
Drum Water Level ကို၊ Float Switch, Level Switch, Level Detector Electrode, Level Transmitter များနဲ့ Detect လုပ်ပြီး၊ Feed Pump ကိုလိုသလိုမောင်းကာ Control လုပ်တယ်လို့၊ ထင်ပါတယ်။ Solenoid Valve နဲ့ ထိမ်းချုပ်တာဆိုရင်တော့.........Feed Pump ကို၊ ထိန်းချုပ်တဲ့ နည်းကိုလည်း၊ ကို CY အချိန်ရရင်၊ ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျား။
Feed pump ကို မရောက်သေးပါဘူး deaerator ရဲ. Water vessel ထဲမှာ level sensor ထည့်ပြီး solenoid valve နဲ. ထိန်းတာပါ ။ control ပိုင်းတွေကိုတော့ ကျွန်ာတော် မသိဘူးဗျ ။ :&#039;(
Boiler Feed Water ကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ သဘေ်ာမှာသုံးတဲ့ Boiler Feed Water Test နဲ့ Treatment တို့နဲ့ ပက်သက်တာလေးကို၊ မှတ်မိသလောက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Boiler Feed Water ဟာ System အတွင်းမှာ Stages များပြောင်းလဲ Circulate လုပ်နေပြီးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Impurities ဆိုတဲ့ Gasses တွေ နဲ့ Undissolved Solids တွေပါဝင်နေပါတယ်။ Impurities တွေကိုခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ
၁။ Oxygen, Carbon Dioxide နဲ့ Amonia လို Dissoloved Gasses များ၊
၂။ Carbonnate နဲ့ Bicarbonnate Hydroxide Content တွေဖြစ်တဲ့၊ Acidity သို့မဟုတ် Alkalinity များ၊
၃။ Calcuim နဲ့ Magnesium Salts တွေဖြစ်တဲ့ Hardness များ၊
၄။ Condenser မှာအအေးခံတဲ့အခါ Tube တွေကတစ်ဆင့် Sea Water ထဲမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတာမို့၊ အကြောင်းတခုခု ကြောင့် Sea water Ingress ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ရေ စိမ့်ဝင်ရောနှောမှု ကနေ၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ Chlorine Content များ နဲ့
၅။ Boiler Feed Water ကို ပုံမှန် Blow Down မလုပ်ပဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုမှုကြောင့် အနယ်အဖြစ်ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ Impurities များဆိုပြီးတွေ့ရှိရပါတယ်။ Impurities ဆိုတဲ့ Gasses တွေ နဲ့ Undissolved Solids တွေဟာ Boiler ရဲ့ Internal Parts တွေဖြစ်တဲ့ Tubes တွေနဲ့ Internal Fittings တွေကို Scale နဲ့ Corrosion များဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
ဘိုင်လာသုံး ရေ မှာပျော်ဝင်နေလေ့ရှိတဲ့ Impurities တွေက၊ CaCO3 လို့ခေါါတဲ့ ကယ်လစီယံကာဘွန်နိတ်၊ Ca(HCO3)2 ကယ်လစီယံဘိုင်ကာဘွန်နိတ်၊ CaSO4 ကယ်လစီယံ ဆာလဖိတ်၊ CaCl2 ကယ်လစီယံကလိုရိုက်၊ MgCO3 မဂ္ခနီစီယံကာဘွန်နိတ်၊ MgSO4 မဂ္ခနီစီယံဆာလဖိတ်၊ Mg(HCO3)2 မဂ္ခနီစီယံဘိုင်ကာဘွန်နိတ်၊ NaCl ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်၊ Na2CO3 ဆိုဒီယမ် ကာဘွန်နိတ်၊ NaHCO3 ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဘွန်နိတ်၊ NaOH ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုက်၊ Na2SO2 ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ် နဲ့ SiO2 ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်လစီယံကာဘွန်နိတ် CaCO3, မဂ္ခနီစီယံကာဘွန်နိတ် MgCO3, မဂ္ခနီစီယံဘိုင်ကာဘွန်နိတ် Mg(HCO3)2 စတဲ့ Impurities တွေဟာ Boiler ရေသွားရာလမ်းကြောင်းတွေမှာ Soft Scale ကိုဖြစ်စေပြီး၊ ကယ်လစီယံဘိုင်ကာဘွန်နိတ် Ca(HCO3)2 ဟာ Soft Scale နဲ့ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် CO2 ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ကယ်လစီယံ ဆာလဖိတ် CaSO4 နဲ့ ဆီလီကွန် ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် SiO2 ဟာ Hard Scale ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ကယ်လစီယံကလိုရိုက် Cacl2, မဂ္ခနီစီယံဆာလဖိတ် MgSO4 နဲ့ မဂ္ခနီစီယံဘိုင်ကာဘွန်နိတ် Mg(HCO3)2 တို့ဟာ Corrosion ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် NaCl ကတော့ Electrolysis ဖြစ်စေပြီး၊ ဆိုဒီယမ် ကာဘွန်နိတ် Na2CO3, ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ် Na2SO2 နဲ့ NaOH ကတော့ Alkalinity ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဘွန်နိတ် NaHCO3 ကတော့ Foaming ဆိုတဲ့အမြှုတ်တွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Alkaline သို့မဟုတ် Temporary Hardness ဟာ CO2 နဲ့ H2O ပေါင်းစပ်ရာက ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ H2CO3 ကာဘွန်နိတ် အက်ဆစ် နဲ့ CaCO3 ကယ်လစီယံကာဘွန်နိတ်တွေပေါင်းစပ်ရာက ပေါါပေါက်လာတဲ့ Ca(HCO3)2 ကယ်လစီယံဘိုင် ကာဘွန်နိတ် ကနေ ဖြစ်ပေါါလာရခြင်း ရယ်လို့ မှတ်သားမိပါတယ်။
တစ်ခါ Boiler ရေထဲက Alkaline သို့မဟုတ် Temporary Hardness Ca(HCO3)2 ဟာအပူပေးခံရတဲ့အခါ၊ CaCO3 လို့ခေါါတဲ့ ကယ်လစီယံကာဘွန်နိတ်၊ CO2 နဲ့ H2O အဖြစ် ပြိုကွဲသလို၊ Mg(HCO3)2 မဂ္ခနီစီယံဘိုင်ကာဘွန်နိတ်ဟာလည်း အပူပေးခံရတဲ့အခါ၊ မဂ္ခနီစီယံကာဘွန်နိတ်၊ CO2 နဲ့ H2O အဖြစ်ပြိုကွဲပြီး၊ Non-alkaline သို့မဟုတ် Permanent Hardness ဆိုတဲ့ Scale + Carbonic Acid ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Alkaline သို့မဟုတ် Temporary Hardness နဲ့ Non-alkaline သို့မဟုတ် Permanent Hardness တို့ပေါင်းစပ်ရာက Total Hardness ကိုဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
Boiler ရေထဲက ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဘွန်နိတ် ကိုအပူပေးတဲ့အခါ ဆိုဒီယမ်ကာဘွန်နိတ်၊ CO2 နဲ့ H2O အဖြစ်ပြိုကွဲသလို၊ ဆိုဒီယမ်ကာဘွန်နိတ်၊ ဟာ H2O နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး၊ အပူပေးရာကနေ 2NaOH ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောက်ဆိုဒ် နဲ့ CO2 တို့လို့ခေါါတဲ့ Non-scale Forming Salts တွေ ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ ထို့အတူ Total Hardness နဲ့ Non-scale Forming Salts တွေဟာ Boiler ရေကို အပူပေးခြင်းဖြင့် ထပ်မံ ပေါင်းစပ်ကာ TDS Total Dissolve Solids များအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပေါါလာပါတယ်။
Boiler ရဲ့ Internal Parts တွေမှာ Scale နဲ့ Corrosion များဖြစ်ပေါါခြင်းကိုတားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် Boiler Water ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဆို တဲ့ Testing ပြုလုပ်ပြီး၊ လိုအပ်တဲ့ Treatment တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။
Dissolved Oxygen ဆိုတဲ့ Oxygen ပါဝင်မှုအတွက်၊ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းကို Indigo Carmine Method လို့ခေါါဆိုကာ၊ Testing &amp; Treatment Products တွေကိုထုတ်လုပ် ရောင်းချတဲ့ အချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေက Oxygen Content ပါဝင်မှုကို၊ Oxygen Analyzer ကဲ့သို့ Testing Equipment တွေ နဲ့ တိုင်းတာ စစ်ဆေး စေပြီး၊ အချို့သောအဖွဲ့အစည်း တွေ က Carmine သုတ်ထားတဲ့ Strip ဆိုတဲ့ အချောင်းလေး တွေကို Sample Water ဆိုတဲ့ နမူနာရေထဲမှာ နှစ်ကြည့်ပြီး၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှုကို Reference အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးထား တဲ့ ဇယားမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Alkalinity အချိုးအစားကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ၊ ဟိုးအရင်က Litmus Papers လစ်တမတ်စက္ကူစလေးတွေကို၊ နမူနာရေထဲမှာ နှစ်ကြည့်ပြီး၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ကာ Acid သို့မဟုတ် Alkaline ပါဝင်မှု pH Level ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာက ယနေ့ခေါါတ်ကာလမှာတော့ Electronic Instrument တွေကိုသုံးကာ ပိုမိုတိကျစွာတိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်လာပါတယ်။ အသုံးပြုမယ့် Electronic Instrument ကို၊ အသုံးချစစ်ဆေးခြင်းမပြုမှီ တိကျတဲ့ pH Level ကိုတိုင်းတာနိုင်စေဖို့ Buffer Liquids တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုကာ Calibrated ချိန်ညှိခြင်း အရင်ပြု လုပ်ရပါတယ်။
TDS ဆိုတဲ့ Total Dissolved Solids တွေပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့၊ နည်းလမ်းမျိုးစုံအသုံးပြုကာစစ်ဆေးကြပြီး၊ ယနေ့ခေါါတ်မှာတော့ Boiler Water ထဲမှာပါရှိနေတဲ့ Dissolved Minerals တွေနဲ့ Salts တွေရဲ့ Conductivity ကိုတိုင်းတာပြီး၊ ppm Pulse per Million အချိုးအစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြတဲ့ Electronic Instrument တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Boiler မီးထိုးရာမှရရှိလာတဲ့ Super Heated Steam တစ်နည်းအားဖြင့် Dry Steam ဟာ Stages အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်သန်းပြီး၊ Condenser မှာ Condensate ဖြစ်ကာ၊ Steam များလည်း ရောနှောပါဝင်နေသေးတာမို့ De-aerator Tank သို့မဟုတ် Cascade Tank မှာထပ်မံပြီး၊ Condensate ဖြစ်စေပါတယ်။ Cascade Tank မှာ Condensate ဖြစ်ပြီး၊ ရေအဖြစ်သို့ Stage ပြောင်းလာတဲ့ Boiler Feed Water ကိုလိုအပ်သ လို Treatment လုပ်ဖို့ Sample ယူတဲ့အခါ၊ ၂၅ံC လောက်အပူချိန်ရှိတဲ့ ရေဟာစမ်းသတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ Treatment တွေ နဲ့ပက်သက်တာလေးတွေကိုဖော်ပြပါဦးမယ်။
၁။ Dissolved Gasses of Oxygen and CO2 ပုံမှန်အားဖြင့် De-aerator Tank သို့မဟုတ် Cascade Tank မှာ Condensate ဖြစ်ရင်း၊ Dissolved Gasses တွေဖြစ်တဲ့ Oxygen နဲ့ CO2 တို့ဟာအငွေ့ပျံ သွားကြပါတယ်။ အချို့ Boiler တွေမှာ Monitoring လုပ်နိုင်စေဖို့ O2 နဲ့ CO2 Analyzer တွေကို Permanently တတ်ဆင်ထားကြပြီး၊ Oxygen နဲ့ CO2 တို့ပါဝင်မှုကို စမ်းသတ်စစ်ဆေးတဲ့အခါ အကယ်၍ မြင့်မားနေပါက၊ Boiler ရဲ့ Blow Down Valve ကိုဖွင့်ချပြီး၊ Steam ပမာဏကိုလျှော့ချရပါတယ်။ လျှော့နည်းသွားတဲ့ရေကိုတော့ Boiler Make Up Water အနေနဲ့ပြန်လည်ဖြည့် သွင်းပြီး၊ များသောအားဖြင့် Boiler Make Up Water အဖြစ် Fresh water Generator ကို အသုံးပြု လို့၊ Sea Water မှချက်ယူထားတဲ့ Distilled Water ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ တစ်ချို့ Boiler တွေမှာတော့ Cascade Tank မှ တစ်ဆင့် Oxygen နဲ့ CO2 ကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းအပြင် Boiler ရဲ့ Blow Down Valve ကိုအနည်းငယ် Partially Open ဖွင့်ထားပြီး၊ Hot Well ထဲကို Steam အနေနဲ့အဆက်မပြတ်၊ Blow Down လုပ်ကာ ရေအဖြစ်နဲ့ Cascade Tank အတွင်းသို့၊ ပြန်ပို့ပေးတာမျိုးလည်းရှိသလို၊ Engine Room Bilges ထဲကို Steam အနေနဲ့အဆက်မပြတ် Blow Down လုပ်ကာ လျှော့ချတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
၂။ Alkalinity Boiler Feed Water အတွက်အကောင်းဆုံး pH Level ကတော့ 8.5 pH ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီပမာဏထက်လျှော့နည်းတဲ့အခါ Acid ပမာဏဘက်ရောက်လာတာမို့ Boiler Tubes တွေနဲ့ Internal Structure တွေကို၊ Corrosion ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ ပိုတဲ့အခါ Boiler Tubes တွေနဲ့ Internal Structure တွေကို၊ Scaling ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ Alkalinity ဆိုတဲ့ pH Level ကိုထိမ်းညှိထားနိုင်ဖို့ကိုတော့ ဆိုဒီယမ် ဖော့စဖိတ်ဆိုဒါ NaPo4 ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပါတယ်။
၃။ Hardness ကတော့ Calcium နဲ့ Magnesium ဓါတ်များ Boiler Feed Water မှာမြင့်မားစွာပါဝင်မှုကြောင့် ပေါါပေါက်လာရတာ ဖြစ်ပြီး၊ Hardness ကြောင့် Boiler Tubes တွေ နဲ့ Internal Structure တွေကို၊ Scaling ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Polymers အမျိုးအစား ဒါမှမဟုတ် Carbonates နဲ့ Phosphates ကိုအသုံးပြုလို့ ဖယ်ရှားမှုပြုလေ့ရှိပါ တယ်။
၄။ Chlorine Content ကတော့ အသုံးပြုကြီးပြီး Steam ဟာ၊ Condenser Tube တွေကတစ်ဆင့် မှာ၊ Sea Water ကိုသုံးပြီး ဖြတ်သန်းအအေးခံတဲ့ အခါ၊ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် Condenser Tube Corrosion ဖြစ်ကာ ပေါက်ပြီး၊ Sea Water နဲ့ Steam ရောနှောပြီး Cascade Tank ထဲမှာ၊ ဆားဓါတ် Chlorine ပါတဲ့ Condensate Water အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတတ်ပြီး၊ Feed Pump မှတစ်ဆင့် Boiler အတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါ၊ Boiler Tubes တွေနဲ့ Internal Structure တွေကို Corrosion ဖြစ်စေပါတယ်။ ပုံမှန် Test လုပ်ခြင်းဖြင့် Chlorine ရဲ့ ppm ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတာကိုသိနိုင်သလို၊ Salino Meter တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း ၊ သိနိုင်ပါတယ်။ Chlorine ပါဝင်မှုရှိလာရင်တော့ Boiler ကိုရပ်ပြီး၊ Blow Down လုပ်ကာ Condenser Tubes များပါဝင်တဲ့ Cartridge တစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း နဲ့ ယာယီအသုံးပြုနိုင်စေဖို့ Leak ဖြစ်တဲ့ Tube တွေကို Plug In လုပ်ပြီး၊ Blank လုပ်ခြင်း ဆိုပြီးရှိကာ၊ Blank လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း စုစုပေါင်း Tubes အရည်အတွက်ရဲ့ 10 % လောက်အထိ Blank လုပ်ကာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
၅။ TDS Total Dissolved Solids တွေအတွက်ကိုလည်း၊ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Electronic Instruments တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုပြီး၊ Boiler Feed Water အတွင်းရှိ TDS တွေရဲ့ ppm ပါဝင်မှုအချိုးအစားကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သလို Blow Down လုပ်ခြင်းနဲ့ Make Up Water ဖြည့်သွင်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
Typical position forabottom blowdown valve
အသိပညာတွေကို ခုလို မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကိုထွန်းကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကျွန်တော် ကတော့ Boiler Water pH နဲ့ပတ်သက်လို့ နည်းနည်း ပေါ့ ဝင်နှမ်းဖြူး တာပါ..
Marine boiler တွေက pH ကို 8.5 အဖြစ် maintain လုပ်လေ့ရှိပါတယ် (chemical ကို cascade tank မှာ dosing လုပ်တတ်ပါတယ်)
Industrial boiler တွေမှာလည်း pH က Marine Boiler နဲ့ အတူတူပါပဲ.. ဒါပေမယ့် အချို့ boiler တွေကြတော့ pH ကို ဒိထက်မြင့်ပြီးသုံးလေ့ရှိပါတယ်..
ပုံ အရ pH 11 to 12 ဟာ အကောင်းဆုံး ပါ.. ဒါပေမယ့် Drain water ဟာ very High pH ဖြစ်တာကြောင့် public drain မလုပ်ခင် pH neutralise လုပ်ရပါတယ်..
Singapore မှာတော့ sewer ထဲလွတ်တဲ့ရေဟာ pH9အောက်မှာပဲရှိရပါတယ်.. Marine မှာတော့ overboad control က 15 ppm (OWS လို) နဲ့ပဲ စံယူမယ်ထင်ပါတယ်..
တကယ်တန်းတော့ pH တခုတည်း မဟုတ်ပဲ Alkalinity ppm ဟာလည်း Boiler water အတွက် အရေးပါ တဲ့ အချက်ပါ..
pH ဘယ်လောက် maintain လုပ်မလဲ ဆိုတာ Alkalinity ဘယ်လောက် ပါနေ သလဲပေါ်မူတည်နေလို့ပါ..
ဒီနေရာမှာ &quot;Baylis Curve&quot; က မသိလို့မဖြစ်ပါ
Curve အရ pH7လည်း Boiler Water အဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် Alkalinity ကို 300ppm မှာ maintain လုပ်ရပါမယ်.. pH နဲလေ corrosive &amp; scale-forming free ဖြစ်တဲ့ windows ကျဉ်းသွားလေပါ..
windows ကျဉ်းသွားလေ control အတွက်ခက်လေပေါ့ .. အဲဒါကြောင့် windows လဲကျယ်ပြီး pH neutralise စရိတ်လဲမကုန်တဲ့ pH8.5 ဟာ eco အရ အသုံး များလာပါတယ်
အခုလို ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါ၊ စာဖတ်နေရင်း တခုလောက် မေးချင်လာလို့ပါ
ကျနောတို့ လုပ်ငန်းတချို့မှာ cooling twer 20 ton မှ 300 ton ထိစသဖြင့် သုံးပါတယ်
ဒီနေရာမှာ boiler နဲ့ coling tower တို့ တွက်ချက်ပုံများ တူမယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်
water quality testing လုပ်တာလဲ တူပါမယ်
ဒီနေရာလေးမှာ သိတာလေး မျဝေဖြေပေးပါခင်ဗျား
Install boiler tube (အတွေ.အကြုံရင့်တဲ့ ဘိုင်လာအော်ပရေ တာတွေဆိုရင် အသံကြားရုံနဲ. tube ပေါက်မပေါက် သိပါတယ်တဲ့ ။
Boilers တွေမှာ coal, oil နဲ့ gas တို့ကို၊ common fuel အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ coal ဆိုတဲ့၊ ကျောက်မီးသွေး (http://en.wikipedia.org/wiki/Coal)ဟာ၊ carbon content ကာဘွန်ပါဝင်မှုများတဲ့၊ solid fuel ဖြစ်ပြီး၊ carbon content အပေါါမူတည်လို့၊ peat coal , lignite coal သို့မဟုတ် brown coal, bituminous coal , semi-bituminous coal နဲ့ anthracite coal ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. Bituminous coal
Fig. Anthracite coal
bituminous coal (http://en.wikipedia.org/wiki/Bituminous_coal) နဲ့ Antracite coal (http://en.wikipedia.org/wiki/Anthracite) ကို၊ boiler fuel အနေနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။ bituminous coal နဲ့ anthracite coal တွေမှာ 1.5 % per weight အချိုးအဆနဲ့ sulfur ဟာပါဝင်နေပါတယ်။
Fig. Processes Occurring during Combustion
boiler မီးထိုးစဉ် combustion process အတွင်း၊ sulfur ဟာ၊ furnace အတွင်း atmosphere မှ၊ oxygen နဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ၊ Sulfur dioxide (SO2) (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide) နဲ့ Sulfur trioxid (SO3) (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_trioxide) တို့ကိုဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ hydrogen ဟာ oxygen နဲ့ပေါင်းစပ်ကာ၊ ရေ ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ combustion process ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ၊ Sulfur trioxid ဟာ၊ ရေ နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး၊ Sulfuric acid (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfuric_acid) ကိုဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
combustion process အတွင်း၊ flue ရဲ့ temperature မမှန်တဲ့အခါ၊ Sulfuric acid ဟာ၊ condense ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီး၊ boiler ရဲ့ internal parts တွေကို၊ corrosion ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ flue gas တွေနဲ့အတူ၊ atmosphere အတွင်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသလို၊ coal ash ဆိုတဲ့ ကျောက်မီးသွေးပြာတွေကလည်း၊ flue gas တွေနဲ့အတူ၊ atmosphere အတွင်းရောက်သွားတဲ့ အခါ၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
Fig. Tangential firing burner
coal ကို၊ boiler fuel အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ boiler turn-down ratio (http://en.wikipedia.org/wiki/Turndown_ratio_%28boilers%29) နဲ့ flexibility ကောင်းစေဖို့၊ 30+ pf burners တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ coal ကို၊ boiler fuel အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ အခါ၊ boiler turn-down ratio နဲ့ flexibility ကောင်းစေဖို့၊ 30+ pf burners တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ burner ကို boiler ရဲ့ wall ဒါမှမဟုတ် အပေါါဖက်မှာတတ်ဆင်ထားပြီး၊ pulverized fuel ရဲ့ flow ကို၊ လိုအပ်သလို control လုပ်ပေးတဲ့ burners တွေကို pf burners (http://poisson.me.dal.ca/site2/courses/mech4840/16_TangentBurner%2707.pdf) တွေလို့ခေါါပါတယ်။ pf burner နဲ့ မီးထိုးခြင်းကို၊ front firing, opposed jet firing, tangential firing နဲ့ down-shot firing ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။